SERIE A YAAN LAGU SIRMIN: Edgar Davids oo is barbardhigay horyaallada EPL, Serie A & Bundesliga! – Gool FM
SERIE A YAAN LAGU SIRMIN: Edgar Davids oo is barbardhigay horyaallada EPL, Serie A & Bundesliga!
(Amesterdam) 12 Okt 2016 – Arbihii hore ee kooxaha Inter, Milan iyo Juventus ee Edgar Davids ayaa kadigey “in la yareeysto” ciyaaraha Talyaaniga.
“Markii aan Talyaaniga ka dheelayay, wuxuu ahaa horyaalka ugu tayo wanaagsan, qof kastana wuxuu doonayay inuu daawadoSerie A,” ayuu Davids gocday isagoo la hadlaya Telecaprisport.
“Haatan Premier League ayaa booskaa (daawashada) ka galay Italy, halka Bundesliga uu ka horreeyo dhanka dadka soo xaadira garoomada. Taasina waa i xanuujinaysaa.”
“Balse iyadoo sidaa la leeyahay, misna haddaad qof ku tiraahdo: ‘ii sheeg 5 kooxood oo Jarman ah’ waxay kuu sheegi karaan mid ama laba, balse haddaad Talyaaniga waydiiso markiiba waxay kuu tirin karaan 5 kooxood.”
“Miyay tayadii ciyaaraha Talyaanigu hoos u dhacday? Sidaa ma dhihi lahayn. Soo qaado England, oo ah meel laga ciyaarin kubadda ugu wanaagsan, balse laga dheelo kubad baashaal leh, yeelkeede xulka qaranku kuma fiicna tartamada waawayn.” ayuu yiri Davids.
“Italy dhanka kale had iyo goor way ku wanaagsan yihiin tartamada caalami, qof kastana way ku adag tahay inuu Talyaaniga garaaco, qof kasta waxay la tahay inuu Talyaanigu hanan karo koobabka tartamada waawayn, halka qofkina uusan sidaa dhahaynin Ingiriiska.”
“Italy kuma xuma tartamada waawayn, sidaa darteed laga yaabee in loo baahan yahay dib u habayn yar oo qura. Ma yaraysan karno Talyaaniga, laacibiinta waawayni waxay aadaan England, balse laacibiinta hibada lihi waxay kusoo baxaan Talyaaniga, marka wax laga werweraa ma jiraan.” ayuu ku dhameeyay Edgar Davids.
Barcelona oo go'aansatay inay iska iibiso Aleix Vidal
Didier Drogba oo lagu wado inuu dib ugu soo laabto Yurub….(Waa kooxdee???)